My Collection Which I like from FaceBook Post (Burmese version) Share…
What to Upload to SlideShare by SlideShare 10233964 views
Be A Great Product Leader (Amplify,... by Adam Nash 1618618 views
Trillion Dollar Coach Book (Bill Ca... by Eric Schmidt 1650042 views
APIdays Paris 2019 - Innovation @ s... by apidays 2157612 views
A few thoughts on work life-balance by Wim Vanderbauwhede 1510380 views
Is vc stillathing final by Mark Suster 1392082 views
MY COLLECTION WHICH I LIKE FROM FACEBOOK POST
SHARE TO YOU ALL 2-6-2017
U Tun Mya May 25
Zaw Myo Lwin shared Zaw Lin's
April 20 • 2017
ဇေ လင်း Zay Lin
မင်း ယျာ December 22, 2016
RETIREMENT WORK IN HOME
1. MY COLLECTION WHICH I LIKE FROM FACEBOOK POST SHARE TO YOU ALL 2-6-2017 https://www.facebook.com/snow.cherry.589/posts/188513869841 3007 Naychi Oo ပါဝါ ၂ ခုနဲ့ တုင်းပြ် . . . . . ယနေ့ အစုးရမနှာ အဓက ကုင်တွယ်ရတဲ့ စှာမျက်နနှာ သုံးရပ်ရနပါတယ်ယ်။ (၁) ပြ်တွင်းအုပ်ချပ်ရေးစှာမျက်နနှာ (၂) စစ်မက်ဖြစ်ပွှားနေနဲေ သမျှားနဲ့ က်နက်ကုင်မျှားကြးစုးရှာေ သ (၃) နုင်ငံတကှာစှာမျက်နနှာ ၃ ခု အဓက ရနပါတယ်ယ်။ ပြ်တွင်းအုပ်ချပ်ရေးစှာမျက်နနှာန နဲ့ စစ်မက်ဖြစ်ပွှားနေနဲသေတွေသေတွေမနှာ့ က်ရနအစုးရရဲ့ လပ်ရနှားခွင့်ရတဲ့ Space တွှော တှော တှော်တှော်ေ့း ကျလ်းမြှောင်းပါတယ်ယ်။ အကြှောင်းရင်းကတှော့ အစုးရရဲ တှာဝန်ဝတဝရှားတွေကု ပပပြင်ပြင့်ြ်ပ့ြ်ပတ်မှောင်းနနင်ပေးမယ့်ှာနနုင်ရှာတွေေ့းံ့နေခြင်းန တရှားလပေ တရှားလပေ စုးမုးမလမရနသေးခြင်း စတဲ့အကြှောင်းတရှားတွေကြှောင့်ပါပဲယ်။ လပမှာပြှောရရင့် က်ရနအစုးရရဲ ပေစေ့တစ်ခုကု အေ အကှောင်အထ်ြဖှော်နှောင်မယ့်နေရှာမနှာ ထထ ထထရှောက်ရှောက်မု့ပ်နုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေန့ုက်နှာမလမရနတဲ့ ဝန်ထမ် ဝန်ထမ်းတွေကုယ့်ုအရေးယးမဲ့ နုတဲ့အချက်တွေန အကျ
2. အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေကု အရေးယးဖု့ လပေ လပေ အထက်မ်ြသးမနျမရနစေရနုပြးဖှော်နှောင်မယ်နုရင် ပြ်တွ ပြ်တွင်းမနှာ အရေးကြးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အပေေုယ်သးက တ တကယ်သြဇှြာှောင်းနေသဲ့နုတဲ့အချက်တွှော အင်မတန် စကှာြးေ စကှားပြှေှာ့ာပါတယ်ယ်။့ က်ရနအစုးရအနေနဲ့ ပြ်တွင်းအုပ်ချပ်ရေးစှာမျက်နနွှာာုယ့်ုယ့်ုဖြစ်နေဲ့နုရင် တုင်းပြ်တစ်ခုထဲမနှာ ပါဝါ နနစ်ခု သးခြှား သးခြှားတ်ြရနနေတဲ့ အသွင်ဖြစ်ပေှေ့ာပါတယ်ယ်။ ပထမ ပါဝါက အစုး အစုးရကုယ်တုင်ဖြစ်ပြုးတယပါဝါက တပ်မတှော်လးစးတဲ့ က်န့ က်နက်ကုင်အင်အှားစုတွေဖြစ်ပါတယ်ယ်။ ပါဝါ နနစ်ခွှုာ တု တုင်းပြ်တစ်ခုထဲမနှာရနတဲ့အခါမနှာ ပွတ်တု ပွတ်တုက်မလတွေဖြစ့်ှာတတ်တှာမျးတွေရနှ့ာတတ်တယ်ယ်။့ က်ရန အစုးရွှာ သးခြှားပါဝါ တပ်မတှော်ကု့ လမ်းမုးဖု့အတွက် (၁)-တုင်းရင်းသှာ့းက်နက်ကုင်တွေကု စ်ပု့မေစနြ်းနဲ့နြယးခြင်း (၂)-နုင်ငံတကှာနက်နံရေးကု ထးထှောင်ပြး တပ်မေ တပ်မတှော်ကု့လမ်းမုးဖု့ ကျြးစှားခြင်း နုတဲ့ နြ့်းမ်းတွေကု သုံးစွဲနေတှာကုတွေ့ရတယ်ယ်။ တကယ်တမ်းတှော့ု သးခြှားပါဝါ နနစ်ခုဖြစ်နေစေတဲ့ အဓက သှော့ သှော့ချက်ွှာ 2008 အခြေခံလပေ ဖြစ်ပြး လပေ ကု ရေနှာင့်လဲ(Bypass)့ုပ်ဖု့အှောင်နန်းစုကြ်က အထက်ပါနြ့်းမ်းတွေနဲ့ ကျြး ကျြးစှားနေတှာကုတွေ့ရတယ်ယ်။ နြ့်းမ်းတွေကု သးက အမျး အမျးသှားပြန့်ြ်ရင်ကြှားစေ့ရေုး့ အကြမ်းဖျင်းခေဝေသေုံးစွဲပါတယ်ယ်။
3. (၃)့က်ရနအစုးရအနေနဲ့ အှာရုံစုက်သင့်တဲ့အချက်က ပြ်တွင်းအုပ်ချပ်ရေး Governance ကု ကျစ်ကျစ့်ျစ့်ျစ်နဲ့ ကုင်တွယ်နုင့်ှာရင်န တ တနြ်းအှားဖြင့့် က်ရနအစုးရရဲ အုပ်ချပ်ရေ့းက်တံတွေ အှား အှားကှောင်းမှောင်းသန်ဖြစ့်ှာရင် တပ်မတှော်ကု့ လမ်းမုးဖု့ အှ့ားအှ့ာ အှ့ားအှ့ာကှောင်းတယ်နုတဲ့ အချက်တစ်ခုရနပါတယ်ယ်။ါ့အပြင် အြေ အခြေခံဝင်ငွေနဲ့ တုင်းပြ်ရဲ့ စးပွှားရေဲး(Productivity) တက့်ှာရင် တပ်ကု့ လမ်းမုးနုင်စွမ်းမြင့်မှာှး့ာနုင်တယ်ယ်။့ က်ရနအစုးရွှာ အမနတ်ဲ(၃) အချက်ထက် အထက်ပါ အချက် ၂ ချက်ကု ပုအှာရုံထှားတှာကုတွေ့ရတယ်ယ်။ါကုထင်ရနှားစေတဲ့ သက် သက်သေကတှော့ အထက်ပါ အမနတ် ၁ နဲ့ ၂ ကုေေ အှောင်နန်းစုကြ်ကုယ်တုင် တုက်ရုက်ကုင်တွယ်နေတှာပါပဲယ်။ အကယ်၍အှောင်နန်းစုကြ်ကုယ်တုင် သပ်အု့ပ်မျှားနေရင် အမနတ် အမနတ်ဲ(၃) ကု သမ္မတလးထင်ကျှော်ကုယ်တုင် တုက်ရု တုက်ရုက်ကုင်တွယ်ပါက အကျးမျှားထးးခြှားစရှာရနတယ်ယ်။ Myo Set Min ZN.H
4. https://www.facebook.com/u.tunmya/posts/481590108839304 U Tun Mya May 25 · အကှောက်တရှားဖင်ငအုပ်ချ ပ်ခင်းမနအသတရှား ဖင်ငအုပ်ချပ်ခင်းနသဲုယ်။ မန်မှာသမုင်း အုပ်ချပ်ရေးကုသုံးသပ်က်ြငပါကအကှောက်တရှားဖင်ငအုပ်ချ ပ်ခဲ့ကသ်ြသှာအမျှားနုံးငေ့ှ့ာတွေဲရနရပါတယ်ယ်။နယ်ချဲ ကျွန်ုဝရှောက်ခဲစလ်ကြ့်းအကှောက်တရှားဖင်ငအုပ်ချပ်ခဲကပါတယ်ယ်။အ ကှောက်တရှားကုနန်းစစ်က်ြငပါက်အတဝကုတွုပျထှားတဲအ ကှောက်တရှာွးှာ့းပတ်ဝန်းကျင်တွေကုကုပေးတတ်စမ်ဲနုတှာသမုင်းသ က်သေတွေရနနေပါတယ်ယ်။ သဲုသှော့်ြ်းအကှောက်တရှားမနှာအစွန်းနနပါးရနကှောင်း င်းတု့မနှာ်စန်ခေခေ င်းအစွန်း နနင်င်းးထှောက်ခင်းအစွန်းတု့ဖစ်ပါတယ်ယ်။ မ်ြသးမနုအကှောက်တရှားဝင့်ှျာ့င် အစွန်းနနစ်ပါးမနှာတစ်ပါးပါးကု
5. ကျွး့န်မတတ်ပါတယ်ယ်။်စန်ခေခေင်းနုတှာအကှောက်တရှားတု့ရဲထုး ထွက့်ှာတဲအစွန်းဖစ်ပ်းးးထှောက်ခင်းနုတှာအကှောက်တရှားတဲု ရဲငုတ့်နျးလြတ်ခွေသွှားသှောအစွန်းပင်ဖစ်ပါတယ်ယ်။ "စန်ခေခေင်းအစွန်းကုငေ့ှ့ာက်ြငပါကနယ်ချဲအ်ြ့ပ်အစုး ရ နနပ်ကွတ်တဲအုပ်ချပ်ရေးကှောင်ငမန်မှာမျးချစ်စတ်ဓါတ်ပေပေါက်ပး နယ်ချဲကုတှော့်နန်ခဲခင်းသြ်စန်ခေခေင်းအစွန်းဖစ်ပါတယ်ယ်။အဲ ကှာ့တွ င်နယ်ချဲအု့တှော်ရစတ်ဓါတ်ပေပေါက်ခဲခင်းကတှောင "းးထှောက်ခင်းအစွန်းပင်ဖစ်ပါတယ်ယ်။ လးနေဝင်ဲး(မန့)ပါတွှာပ်ြသးကုနနပ်ကွတ်တဲအုပ်ချပ် ရေးကှောင်င၁င်ခုနနစ်အရေးအခင်းအုံကွပေပေါက်ခဲတှာကှောင်င (နဝတ)အစုးရပေရေပေပေါက့်ှာပါတယ်ယ်။၁ငင၁ခုနနစ်တွင်NLDအဖွဲ ခေါင်းနှောင်ေ အှောင်နန်းစုက်ြမန်Freedom from Fear" (ကှောက်ရွဲံခင်းမနကင်ွး့တ်ခင်း)စှာအုပ်ကုအ်ြ့ပ်ှုာသှာဖင်ငပေေ ပေါက့်ှာခင်းမနှာ်စန်ခေခေင်းအစွန်းပေပေါက့်ှာခင်းပင်ဖစ်ပါတယ် NLDအဖွဲရဲ်စန်ခေခေင်းအစွန်းကုစစ်ထှောက့်နမ်းရေးအဖွဲမနနြ်း မျးစုံသုံးပးနနတ်ကွတ်ခဲသဖင်င မုကရေစုက်တှော်သှားတစ်စုကတှောင "းးထှောက်ခင်းအစွန်းသဲုရှောက်ရနကှာNLDနဲ့မ်းခွဲခဲကတဲပ်ုဂျ့် တွြေ့်ုးနဲေးရနပါတယ်ယ်။Freedom from Fearစှာအုပ်မန အကှောက်တရှားရဲအကှောင်းတရှားတစ်ချဲတင်ပငင်ပပပ့းသှားတဲုရဲမွေးရှာပါအခေခံ့ဲးအခွင်ငအရေးမျှားကုငင်းပယ်ထှားသှော အုပ်ချပ်ရေးစနစ်မျှားတွင်ကှောက်ရွဲံထတ့်န့်မနျဲမျးစုံသ်ြနေ့စလ်နနင်ငအ မနျဖစ်ပေနေကှောင်းယ်။အနုပါကှောက်ရွဲံထပ့်န့်မနျဲမျှားမနှာထှောင်သွင်းအကျ လ်းကျခံရမ်ြကုကှောက်ရွဲံမနျဲယ်။နနပ်စက်နြင်းပန်းခံရမ်ြကုကှောက်ရွဲံမနျဲယ်။မတ် နွေမျှားကု့က့်လတ်နုံးရမ်ြကုကှောက်ရွဲံမနျဲယ်။နင်းရဲ
6.ုကုရှောက်မနှာကုစုးရမ်ထပ့်န့်မနျဲယ်။မမအု့ပ်အကုင်နုံးရနျံးမနှာကုကှောက်ရွဲံမနျဲယ်။မမပုင်ဓနလစ္စှာမျှာ့းက့်ွတ်နုံးရနျံးရမနှာကှောက်ရွဲံမနျဲယ်။အထး ကျန်နန်ရမနှာကုကှောက်ရွဲံမနျဲယ်။ကျရနျံးမ်ြကုစုးရမ်ကှောက်ရွဲံမနျဲမျှားဖစ် ကပါတယ်ယ်။ အကှောက်တရှာ့းလမ်းမုးခင်းမနွ့က်မှောက်နုင်ဖဲုတင်းကျပ်ပင်းထန်သှောစြ်းမျလ်းစြ်းကမ်းမျှာ့း က်အှောက်ကှောက်ရွဲံခင်းမျှားနဲအတး ကးပင်းနေထုင်ကရသှော့းသှားမျှားအဖဲုအနုပါကှောက်ရွဲံခင်းမျှားမန ရုံးထွက်နုင်ရန်ခွန်အှားနဲစတ်ဓါတ်မျှားမနှာအွ့ယ်တကးပေထွေက့်ှာနုင်မ်ြမွုတ်ပါယ်။ ပ်ြသးကုနနပ်ကွက်တဲ့အုပ်ချပ်ရေးစနစ်ကုရင်နုင်အံတုရန်မနှာကးမှားသှောသး ရသတဝနနင်ငခံနုင်ရ်ြရနမနျဲတု့သ်ြကုယ်ကျင်ငတရှားနုင်ရှာစြ်းမျလ်း စြ်းကမ်းတု့ မွန်မတ်သန့်စင်မနျဲတု့ကုခုင်မဲစေသှောယုံက်ြမနျဲနနင်ငအ တတ်တွင်ဖစ်ပွှားခဲ့သှောသမုင်းနုင်ရှာအသတရှားတု့အပေတွေင်အခေတြ် ခင်းဖစ်ပ့းးသှားတု့သ်ြမြ်မနျပင်အနေနှာက်အယနက်မျှားအပျက် အစးအခေအနေမျှားနနင်ငရင်နုင်ရစေကှာမးစတ်ပုင်းနနင်ငရုပ်ပုင်းနုင်ရှာတုးတက် မနျဲနနစ်ခုစုံ့းမနှာ င့်းးသှားတု့ အန့မရ်ြမနန်းချက်မျှားပင်ဖစ်ပေ သ်ြယ်။့းသှားမျှားအတွက်အမင်ငနုံးတှာဝန်ယးမနျဲမနှာအပစ်ကင်းစင်ခင်ွးးသှောအဓပပါယ်သက်ရှောက်သ်ြငအသတရှားနနင်ငအနုပါအသတရှားကုရယးပုင်နု င်ရန်ပင်းပသှောစတ်နန်ရနခင်း င်းတု့ကုရယးပုင်နုင်ရန့်ုအပ်သှောနြ့်း မ်းမျှားကုရနှာဖွေနုင်သ်ြငအသြှာအ်ရနခင်းအနုပါ အသတရှားကု့က်နှာနှောင်ရွက်ခင်းနနင်ငနှောက်နုံးအပ်ြငအစုံမု့က်နှာနု င့်ျင်တှောင်မနအနးကပ်နုံးသဲု့က်နှာနှောင်ရွက်နုင်ရန်ကုယ် ပုင်ကန်ဲသတ်ချက်မျှားနနင်ငပတ်ဝန်းကျင်နုင်ရှာအွန့်အတှားမျှားကုကျှော့် လှားနုင်ရန့်ုအပ်ပါကှောင်းရေးသှားဖေပေတှာကုငေ့ှ့ာခဲ့ရပါတယ်ယ်။
7. ယနေ့အချန်ကှာ့သ်ြပြ်သ့းးထုကုအသတရှားဖင်ငအုပ်ချပ်ရန်ပ်ြသးအ စုးရပေပေါက်ခဲတှာတစ်နနစ်ကှာခဲပဖစ်ပါတယ်ယ်။မးဝါ မျှားအဖစ်ပ်ြသးတွုပျအုပ်ချပ်ရေ်း်ပ်ြသ်းပ်ြသးတွုပျတရှားလပေ စုးမုးရေ်း်ပ်ြသးန်ပ်ြသးနနင်ငအတ်းမးဝါ မျှားချမနတ့်ျက်အသတရှားဖင်ငအုပ်ချပ် ရေးကုလးတ်ြနှောင်ရွက်နေကှောင်းငေ့ှ့ာတွေ့ရနရမနှာဖစ်ပါတယ်ယ်။အစုးရ အဖွဲ့ ယန့ရှားကးကြု့်ပတ်ဖု့တှာဝန်ခံရတဲ်ှာနမျှားအနက် ထွေအုပ်ှာနြ့်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖစ်ပါတယ်ယ်။ထွေအုပ်ရဲရ်ြမနန်ျးချက်တွေကတှောဲ့ (၁)တရှားလပေ စုးမုးရေဲး (၂)ရပ်ရွှာအေးချမ်းသှာယှာရေဲး (၃)သေဖွဲံဖျးရေဲး ( )ပ်ြသးအကျးပျနှောင်ရွက်ရေးတု့ဖစ်ပါတယ်ယ်။ ထုအပင်ထွေအုပ်ုးအေကးမျှားကျင်ငသုံးခဲ့တဲ့ကျင်ငဝတ်တွေကုတင်ပု့ပါတ ယ်ယ်။်ခွေွးှောင်တှာအစ,့င်မယှားရန်ဖစ်တှာအ့ယ်,နုင်ငံ တှော် အှာအှာသမ်းသ်ြအနုံ်းွးသှောကျင်ငဝတ်မျှားရနခဲပါတယ်ယ်။ အဓပပါယ်ကတှောငထွေဝန်ထမ်းနုတှာသှာမှာန်အခေအနေမနှာရပ်ကွက် ထဲခွေွးှောင်သံကှားရျ့င်သးခု့းးစမ်းဝင်နေပှ့ား?ုံ့ချံရေးအသဖင်ငစးးစ မ်းတတ်တဲအသရနဖု့ကှောင်းယ်။့င်မယှားရန်ဖစ်ခင်းနုရှာဝယ်, ပ်ြသးတွေရဲ့းမနျဲရေးပး နှာစန်ခေမေနျဲတွေကုမမတဲု အုပ်ချပ်ရေး သှုာအတွေ့အကျံ လပေ့ုပ်ထုံုး့ပ်နြ်းမျှားဖင်ငပေရှာပေကှောင်း ဖေရနင်းပေးဖု့နေ့စလ်တှာဝန်ရနကှောင်းနနင်ငယုတ်စွအနုံးနုင်ငံတှော်အစုးရ အဖွဲပှောင်ဲး့မနျဲရနတဲအခါအုပ်ချပ်ရေးယန့ရှာြး့်ပတ်မနျရပ်နုင်းမသွှားဖု့လ ပေ့ုပ်ထုံုး့ပ်နြ်းမျှားဖင်ငအစုးရအဖွဲ့ လြန်ကှားချက်မျှားကုအချန်နနင်ငတေ ပးနြှောင်ရွက်ပေးရခင်းမနှာထွေအုပ်ရဲ့သမုင်းပေးတှာဝန်တစ်ရပ်ဖစ်နေပါ တယ်ယ်။ ထွေအုပ်ရဲသမုင်းကုနန်းစစ်က်ြငပါကအကှောက်တရှားဖင်ငအုပ်ချပ်
8. သှောအစုးရအဖွဲ့ က်အှောက်တွင်တှာဝန်ယးခဲရတှာတွေရနရမနှာဖစ်ပါတယ်ယ်။ ယနေ့နုင်ငံတှော်ကုအုပ်ချပ်နေသှောNLDအစုးရ မးဝါ မနှာအသတရှားကုအေ ခခံသှောပ်ြသးနနင်ငအတးအုပ်ချပ်ရေုး့ပ်ငန်းမျှားပးးပေါင်ုး့ပ်နှောင်ဖု့ကုးပမ်းနှောင်ရွက်နေကှောင်းငေ့ှ့ာတွေ့ရနရမနှာဖစ်ပါတယ်ယ်။ သု့သှော့်ြ်း၂း်းခုနနစ် ခွေလ ပ်ုမ-၂၃၂ပ်ုမခွဲ (ခ)အပု-၂ အရပ်ြထဲရေးဝန်ကးကုတပ်မတှော်သှားကုသှာခန့်ထှားရမယ့်ု့ပ်ှာန်းထှား ပါတယ်ယ်။့က်ရနပ်ြထဲရေးဝန်က်းှာနမနှာတု့်ချပ်ကးအုပ်ချပ်သ်ြင်ှာနဖစ်ေ နသဖင်ငအုပ်ချပ်မနျဲသှေုာသှုာဝမနှာ- "One Command, One Commander" ခေါင်းနှောင်မနအမန်ပေးစနစ်ဖင်ငအုပ်ချပ်ခင်းသှေုာနှောင်ပါတယ့်က်ေ အှာက်ငယ်သှားမျှားမနှြာ့်းအမန့်ပေးခံရမနအု့ပ့်ုပ်ရဲသ်ြငအငေ့အကျင်င မျှာွးှာအထုံဝါသနှာအဖစ်စွဲမျဲ့က်ရနကပါတယ်ယ်။တစ်နြ်းအှားဖင်င်ှာနတွု ပျဲ အုပ်ချပ်ရေုး့ပ်ငန်းသှေုာနှောင်နေပါတယ်ယ်။့ က်ရနအစုးရအဖွဲ ပ်ြသးတွုပျဲအုပ်ချပ်ရေုး့ပ်ငန်းသှေုာသှုာဝမနှာ အုပ်ချပ်ရေုး့ပ်ငန်းအနင်ငတုင်းတွင်ပ်ြသးနနင်ငတစ်သှားတြ်းရနပးပ်ြသဲး အထှာပပပ်ြသဲးအနှာကုအချန်နနင်ငတပေးအြမန်နုံး သရနပးအမန်နုံးဖေရနင်းပေးရမ်ြငအု့ပ်ပင်ဖစ်ပေသ်ြထုအု့ပ်မျှားမနှာထွေအုပ် ကျင်ငဝတ်နနင်ငဝတဝရှားမျှားပင်ဖစ်ပါတယ်ယ်။ သု့ပါ၍့က်ရနထွေအုပ်ှာနတွုပျဲအုပ်ချပ်ရေုး့ပ်ငန်းမနပ်ြသးတွုပျအု ပ်ချပ်ရေုး့ပ်ငန်းသု့မးဝါ အရသွဇှာတဖစ်စေရန်၂း်းခုနနစ် ခွေလ ပ်ုမ၂း၂ပ်ုမခွဲ (က)အရနုင်ငံတှော်သမ္မတ ဝန်က်းှာနမျှားကုသတ် မနတ်ခင်းပင်နင်သတ်မနတ်ခင်းဖ်ြငစွက်ခင်းမျှားတှာဝန်နနင်င့ုပ်ပုင်ခွင်ငအရထွေအုပ်ကုသမ္မတရုံးဝန်က်းှာန့က်အှောက်သု့ရွေဲ
9. ပှောင်းနုင်ပါကပ်ြသးနနင်ငအတးပ်ြသးတွုပျအုပ်ချပ်ရေုး့ပ်ငန်းမျှားပ ပင်စွှာပေပေါက့်ှာ့မ်ငမြ်ွုမျှော့်င်ငမပါတယ်ယ်။ အုပ်ချပ်ရေးှေ့ာကသှားတု့ပ်ြသးနနင်ငအတးတသှားတြ်းရနျ့က် အသတရှားဖင်ငအုပ်ချပ်သှောု့ပ်ငန်းမျှားကုပပင်စွှာနှောင်ရွက်နုင်ကပါစေ https://www.facebook.com/zawmyolwin/posts/10154286518825583Zaw Myo Lwin shared Zaw Lin's photo. April 20 · 2017 Zaw LinFollow August 31, 2014 · စှာရေးသး - မှောင်တင်ငတယ် လးပုင်အစ ၁ယ်။ ၁ငငး ပ်ြငနနစ် ဖေဖှော်ါးရ့ ၁င ရက်နေ့တွင် ထုအချန်က နးတဲ(နုင်ငံ နးတဲ(နုင်ငံတှော်ငြမ်းပ်ပပှားမလ တ်ြနှောက် ရေးအဖွဲ့) အစုးရ ကုန်သွ အစုးရ ကုန်သွယ်ရေးးန်းဝက်းှာနက ပြ် ပ်ြထှောင်စုမန်မှာနုင်ငံစးပွှားရေးလးပုင့်မတက်ဲ(The Union of Myanmar Economic Holdings Limited) ကု ၁င၉း ခုနနစ် အထးး အထးးကုမပအအက်လပေ အရ ဖွဲ့စြ်းကြှောင်း အမန့် ကြှော်ငှာစှာ အမနတ် အမနတ်ွငး ဖငင် ကြှောခဲငသ်ြယ်။ ၁င် ခုနနစ် စက်တင်ှုာဲ့(၁်)ဲ(၁်)ရက်နေ့န အှာအှာသမ်
10.းပြး နှောက်ပုင်း တပ်မတှော်ကတ်ြထှောင်ခဲငသ်ြင ပထမနုံး ပထမနုံးစးပွှားရေုး့ပ်ငန်းဖစ်သ်ြယ်။ လးပုင်စနစ် ၂ယ်။်လးပုင် စနစ်နုသ်ြမနှာ မမအရင်းထက် အနပေါင်းမျှားစွှာပုသှော့ုပ်ငန့်ုပ်ငန်းကုင်ငန်းမျှားကု ဖန့်ခွဲချပ်ကုင် သ်ြင့ က်ါးးးဝ့ က်ါးးးဝကးအုပ်စနစ်ဖစ်သ်ြယ်။ စစ်တပ်လးပုင့်မတက်သြ် အထးး အထးးကုမပအတခုအနေဖင်င မန အပ်ြငအးပုင် နုင်သှော ကုမပအ ကုမပအမျှားနနင်ငကုမပအခွဲမျှားသြ် အခွန်ကင်ွး့တ်ခွငင် အထးးအ အထးးအခွင်ငအရေးကု ရရနခံစှားရမ်ြဖစ်သ်ြယ်။ သု့သှော် တွဲဖက့်ု တွဲဖက့်ုပ်ကုင်သှောကုမပအမျှားမနှာမး မအခွငင်ထးးကု မခံစှားရချေယ်။ လးပုင့်မ်တက်သြ် သေးသေးမလှားမလှာုး့ပ်ငန်းနနင်င အငလံးအမတ်မသေချှာ အငလံးအမတ်မသေချှာသှော့ုပ်ငန်းမျးတွင် မပါးင်ကြချေယ်။လးပုင် သြ် ဖရစ် ဖရစ်ါးနှာနေးးးတု့နနင်င ဖက်စပ့်ုပ်ခင်းဖင်င ပွဲလးထွက်ခဲငသ်ြယ်။ ယခု စစ်တပ်လး စစ်တပ်လးပုင့်မတက်တွင် အစုရနယ် ယှားင်မျှားကါါရုက်တှာရွေးချယ်ခွင်ငမ်ြသု့ရနကြှောင်း ရနင်းအှောင် မကြှောခဲင မကြှောခဲငကြှောင်း တွေ့ရနရသ်ြယ်။ ရ်ြရွယ်ချက် ၃ယ်။ တရှားဝင်ဖှော်ပထှားသှော ရ်ြရွယ်ချက်ဲ( ) ချက်မနှာ အှောက်ပါ အှောက်ပါအတုင်း ဖစ်ပါသြ် - (က) တပ်မတှော်သှားမျှားနနင်င တု့ မနခုသး ဇနးသှားသမးမျှား သက်သှာ သက်သှာချှောင်ချရေးယ်။
11. (ခ) စစ်မလထမ်ွးှောင်းမျှားနနင်င တု့ မနခုသး ဇနးသှားသမးမျှား သက်သှာချှော သက်သှာချှောင်ချရေးယ်။ (်) ပ်ြသ့းးထု သက်သှာချှောင်ချရေးအှား အထှောက်အကးဖစ်စေရေးယ်။ (ဃ) နုင်ငံတှော် စးပွှားရေးဖွံ့ဖျြးတုးတက်မလကု အထှောက်အကး ဖစ်စေရေးယ်။ အမနန်တွင်မး လးပုင့်မတက်ကု နးတွနအဖ စစ်အုပ်စုက တ တ်ြထှောင့်ုက်သ်ြင ရ်ြရွယ်ချက်ထဲတွင် စစ်တပ် အရှာ အရှာရနးဝကးမျှားကသှာ ထပ်ပုင်းမန ချယ့်နယ်အကျးခံစှားရရေးန တပ်သှား တပ်သှားမျှာ့း ခကုဖတ်ပြး အရင်းပျကှာ သွေးစုတ် ရေး စသ်ြတု စသ်ြတု့ အု့ု့ပါးင်ပြးဖစ်နေသ်ြယ်။ အှောက်ခေ အှောက်ခေတပ်မနးတပ်သှားမျှာုးးကု အသေခံပဲစှာုးးမန မနင် မနင်ငတင် မ်ြငရ်ြရွယ်ချက့်ုံးးမပါးင်ချေယ်။ ချပ်ပှောရ့နျင် စစ်အှာအှာရနင်သက်နုးရန်ြရေးနနငင် စစ်တု့်ချပ် မသှားစုမျှား မသှားစုမျှား ရှာသက်ပန်အကျးစးပွှားအတွက် တုင်းပြ် စးပွှားရေးအသက်သွေးကြှောတခုံ့းအှား အှာအှာဖင်င့ က်ါးးးဝက့း က်ါးးးဝကးအုပ်ရန် ပင်နင့်ုပ်ကုင်ခင်းပင် ဖစ် သ်ြယ်။ လးပုင်ဖွဲ့စြ်းပုံ ယ်။ ပ်ြထှောင်စုမန်မှာနုင်ငံစးပွှားရေးလးပုင့်မတက်တွင် လေးနျှာင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စြ်းပုံနနင်င လကင်ရုံဲး(ါရုက်တှာ အဖွဲ့) ဖွဲ့စြ်းပွုံး၍ ဖွဲ့စြ် ဖွဲ့စြ်းပုံနနစ်ခုရနသ်ြယ်။ လေးနျှာင်အဖွဲ့တွင် တု့်ချပ်မနးးဝကးသန်းရေလဲ(တပ်မတှေဲာ(တပ်မတှော် ကှာကွယ်ရေး လး စးချပ်)နုတယတု့်ချပ်မနးးဝကးမှောင်အေဲး(ုတဲ(ုတယတပ်မတှော်ကှာကွယ်ရေးလးစးချပ်)နုတယတု့်ချပ်းဝကးမင်း အှောင့်လ အှောင့်လင်ဲ(ကြ်ွးရွေေ့ နြနလင်းကွပ်ကဲရေးမနး)နုတယတု
12.ုတယတု့်ချပ်းဝကးဉှာအ်ထွန်ဲး(လးစးချပ်-ရေ)နုတယတု့် ချ ချပ်းဝကးမတ်ွန်ဲး(လးစးချပ်-ေ့)နုတယတု့်ချပ်းဝကးသန်းထုက်ဲ(တပ်မေဲ(တပ်မတှော်စစ်နေးရေးအရှာရနချပ်)န တု့်ချပ့်န ရေလဲ(တွဲ(တွဲဖက်စစ်ရေးချပ်) တု့ ပါးင်သ်ြယ်။ လကင်ရုံါးရုက်တှာအဖွဲ့တွင် ယခင်ကုတယတု့်ချပ်းဝကးတင်အေဲး(ကက ထုတ်) ဖစ်ပြး ယခု တု တု့်ချပ်ခင်ဇှော်လဲး(စစ်ရေးချပ်)န တု့်ချပ်းင်းသန်ဲး(ကကးယ်)န ကှာကွယ် ကှာကွယ်ရေးးန်းဝက်းှာန လြန် ကြှားရေးမနးရုံးမျှားမန လြ လြန်ကြှားရေးမနးမျှားန အရှာရနချပ်မျှားနုတယတု့်ချပ်းဝကးမျှားနနင်င တု တု့်မနးးဝကးမျှား ပါးင်သ်ြယ်။ ပ်ြထှောင်စုမန်မှာနုင်ငံစးပွှားရေးလးပုင့်မတက့် က်အှောက်ရန့ုပ်ငန့်ုပ်ငန်းမျှားအှား လကင်ရုံဲး(ါရုက်တှာ)အဖွဲ့းင် ပါးင်သှော တု တု့်မနးးဝကးမျှားနုတယတု့်မနးးဝကးမျှားမန မန်နေ်ျင်ါးရုက်တှာမျှားနါါရုက်တှာမျှားအဖစ် တှားန်ယးနှောင် ရွက်သ်ြယ်။ စးပွှားရေးလးပုင်တွင် တှားန်ထမ်းနှောင်ကြသှေားန်ထမ်ဲး(အရှဲာ(အရှာထမ်ွးအမလထမ်း) မျှာ့း စှာနလန်းထှားမျှားမနှာ- စလ် ရှာထး့း စှဲာ(၁) ရက်ခံစှားခွင်င ၁ယ်။ အငယ်တန်းစှာရေးးးး ၁်းး ၂ယ်။ အးဝကးတန်းစှာရေး ၉၃းးး ၁ငးး ၃ယ်။်ှာနခွဲစှာရေးးးးး ၁ငးးး ယ်။ ရုံးအုပ်းးးး ၁ငးး ၉ယ်။့ က်ထှောက်မန်နေ်ျှာ ၁၂းးးး ၂၉းး ယ်။ မန်နေ်ျှာ ၁၃းးးး ၂၉းး
13. ယ်။့ က်ထှောက်အထွေထွေမန်နေ်ျှာ ၁းးးး ၂ ၉်းယ်။ အထွေထွေမန်နေ်ျှာ ၁်းးးး ၂ ၉ ငယ်။ါရုက်တှာ ၁ငးးးး ၂ ၉း ၁းယ်။ မန်နေ်ျင်ါးရုက်တှာ ၂၁းးးး ၂ ၉း အငယ်တန်းစှာရေးမန ရုံးအုပ်အထ ရှာထးးမျှားသြ် အမလထမ်းမျှားဖစ်ပြ့း က်ထှော့ က်ထှောက်မန်နေ်ျှာနနင်ငအထက် ရှာထးး မျှားသြ် အရှာထ အရှာထမ်းမျှားဖစ်သ်ြယ်။ မန်မှာငစးပွှားရေးလးပုင့်မတက့် က်အှော့ က်အှောက်တွင် တှားန်ထမ်းနှောင်သှော အငယ်တန်းစှာရေ့း စှာမနှာ့ စှာမနှဲာ(းးး) ကျပ်နနင်င တ့စှားစရတ်ငွေမနှဲာ(၃းးး) ကျပ်ဲ(ရုံဲး(ရုံးပတ်ရက်ရက်မပါ) စုစုပေါင်း၃းးး ကျပ်ရရနသဖငင် တပ်မေ တပ်မတှော်တွင် တှားန်ထမ်းနှောင်နေသှော တပ်ြ တပ်ကြပ်းဝကးမျှားထက်ပင့် စှာပုမျှား နေပါသ်ြယ်။ မန်မှာနုင်ငံစးပွှားရေးလးပုင့်မတက် လကင်မနှာ တု့်ချပ်ခင်ဇှော်လးန စးပွှား စးပွှားရေးလးပုင့်မတက် မန်နေ်ျင်ါးရုက် တှာမနှာ တု တု့်ချပ်းင်းသန်းဖစ်သ်ြယ်။ စးပွှားရေးလးပုင့်မတက် လကင်ရှာထးးအှား တု့်ချ တု့်ချပ်မနးးဝကးသန်းရေလနနင်ငုတယ တု့်ချပ်မနးးဝကးမှောင်အေးတု့ စတ်ချ စတ်ချရသှော့းယုံမျှားကုသှာ ထှားငေ့ရနသ်ြယ်။ တု တု့်ချပ်းင်းသန်းမနှြာ့်း ကကးယ်မနဖစ်သှောကြှောငင် တု့်ချ တု့်ချပ်မနးးဝကးသန်းရေလ မးဖုချှောင်ကု ဖ်ြငတင်းပေးနေရသှော စပါးကျန စပါးကျနနင်င စတုးနုင်းဝကး မန်နေ်ျှာသဖွယ် ဖစ်ပေသ်ြယ်။ုတယ မန်နေ်ျင်ါးရုက်တှာမနှာုတယတု့်မနးးဝကးသန်းထွန်ဲး(DSA 17)န ယခင်ုတယတု့်မနးးဝကးမှောင်မှောင်ဲ(DSA 15) နေရှာဖစ်သ်ြယ်။ နေရှာသြ့်ြ်းးင်ငွေအွ့န်ကှောင်း ယ်။ ပစ္စြ်
14. ပစ္စြ်းနျေှ့ာက့်လှာမျှားအှား မန တနင်င စးပွှားရေးလးပုင်လကင်သု့ တင်ပရသ တင်ပရသ်ြယ်။ုတယတု့်မနးးဝကးသန်းထွန်းသြ် စးပွှားရေးလးပုင် အုပ်ချ အုပ်ချပ်ရေ်းှာန အးဝကးအကြဲ့်းဖစ်သ်ြယ်။ သြ် အုပ်ချပ်ရေးန စမံ စမံရေးနးန်ထမ်းခန့်ထှားရေးနနင်င ပစ္စြ်းနျေှ့ာက့်လှာမျှား အှား ကုင်တွယ်ထှား ကုင်တွယ်ထှားသ်ြယ်။ ရင်းနနးမျပ်နနံမလ ပမှာအ ၉ယ်။ အစကနလး အရင်းအနနးပမအမနှာ ၁ငငး ခုနနစ်ခန့်က ကျပ်ကု ကျပ်ကုေ တထှောင်ဲ(သန်း ၁းးးး) ရနသ်ြယ်။ တမှာပြ် သမု သမုင်းတွင် စတင်တ်ြထှောင်စု့ပ်ငန်းတခုအဖု့ အးဝကး အးဝကးမှားနုံးအရင်းအနနးအဖစ် စံချန်သစ်တင့်ုက်သ်ြယ်။ ကုန်သွယ်ရေးးန်းဝက်းှာန အမန့်ကြှော်ငှာစှာအမနတ်ွငးန အပ်ုန၉န အရ အ အရ အရင်းအနနးး၏ ကု ကှာကွယ်ရေးးန်းဝက်းှာန ပစ္စြ်းး ပစ္စြ်းးယ်ယးမလလြန်ကြှားရေးမနးရုံးက ထ်ြငးင်ပြး ကျန်း၏ ကု စစ်တ စစ်တပ်အသုင်းအုးင်းမျှားက ထငြ်းင် သ်ြယ်။ ကှာကွယ်ရေးးန်းဝက်းှာန ပစ္စြ်းးယ်ယးမလလြန်ကြှားရေးမနးရုံဲး(ကကဝယ်) က ထ က ထငြ်းင်သငြ်း၏န တနြ်း ကျပ် ကုေးး မနှာ ပ်ြသး ပ်ြသုး့ဘှာမျှားဖစ်သ်ြယ်။အချပ်နုရသှော် စစ်တ စစ်တပ်အးန်းအုးင်းကဲ(တကယ်စင်စစ်အှားဖင်င စစ် တပ်ထ တပ်ထပ်သးမျှားက) ပုင်နုင်ခံစှားကြမ်ြင ရင် ရင်းနနးမနျပ်နနံမလးဝကးအတွက် ပ်ြသ့းးထု ငွေ ကျပ်ကုေးး ကု အတုး မရန ကု အတုး မရန နွဲသုံုး့က်ခင်းဖစ်သ်ြယ်။
15. ကျန်း၏ ကု စစ်မလထမ်းနဲ နနငင် အငြမ်းစှားတပ်မတှော်အရှာရနမျှားန စစ်မလထမ် စစ်မလထမ်ွးှောင်းအုပ်စုမျှား အပါအးင် တပ်မတှော်ပုင် စးပွှား စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းနနငင် မတ်နွေအဖွဲ့မျှားက ပုင်နုင်မ်ြဖစ်သ်ြယ်။ တုးပွှာှး့ာသင်ြအရင်းအနနးမျှား ယ်။ ၂းး ခုနနစ်တွင် လးပုင်ေ authorized capital (တရှားးင်သတ်မနတ်သင်ြငွေရင်း-ကုမပအက ထုတ်ပေးမ်ြင အစု ရနယ်ယှာ ရနယ်ယှာမျှား တန်ဖုး)မနှာ ကျပ်သန်းပေါင်ဲး(း,းးး) နနငင် allotted capital (ခွဲေးသတ်မနတ်ပေးအပ်ပြးသှောအရင်း) ကျပ်သန်းပေါင်ဲး(၃င,းးး) ရနသ်ြယ်။ မအထဲတွင်ဲ(ကကန) က ကျပ်သန်းးး ကျှော် နနင်င ကကဝယ်က ကျပ်သန် ကျပ်သန်း ၃၃းန့ က်ရနစစ်မလထမ်း ၃ သှောင်းခွဲက ကျပ်သန်း ၁ငးး ကျှော်န ကျှော်န တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ ၁၉းး ခန့်က ကျပ်သန်း ၃ သှောင်း ၃ ထှောင်ကျှော ထှောင်ကျှော်န အငြမ်းစှားစစ်မလထမ်းးးး ကျှော်က ကျပ်သန်း ၁၂းးန စစ်မလ ၁၂းးန စစ်မလထမ်ွးှောင်းအဖွဲ့မျှားက ကျပ်သန်းးး ကျှော် ပါဝင်သ်ြယ်။ လးပုင်သု့ထ်ြငးင်ရမ်ြင ငွေကြေးအချးအစှားအရ တပ်းဝကးနုရင် သန်ဲး(၁းဲး(၁းးး)န တပ်ရင်ွး တပ်ဖွဲ့အနင်င တပ့်တ် နုရင် သန်ဲး (၃းး) မနဲ(၉ဲး(၉းး)န တပ်ငယ်နုရင် သန်ဲး(၂းး) မဖစ်မနေ ရ်ြမနန်းချက်ထှား၍ သတ်မန သတ်မနတ်ကှာ့တခု အတွင်း စုနှောင်းထ်ြငဝင်ရမြ်ွုလန်ကြှာ်းလန်ကြှားချက်ရနခဲငသ်ြယ်။ မငွေမျှားကု တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားက ကု ကုယ်ငအစအစလ်နနင်င ကုယ်ငနြ့်းမ်းအမျးမျးဖင်င ရနှာကြရသ်ြယ်။ အမတ်အစွန်းမျှား ယ်။ ၂းး -ုးဘှာရေးနနစ်တနနစ်အတွင်း လးပုင့်မတက်သြ် အမတ် အမတ်ငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၉ သှောင်းခန့် ရနှာဖွေ နုင်ခဲငသ်ြယ်။ လးပုင့်မ
16. လးပုင့်မတက် ကုမပအအှာုးံ့းပေါင်ုး့က့်နျင် ငထက်မျှားသ်ြယ်။ ၁ငင ၁ငင၉-ငုဘှာရေးနနစ်ကမး ၃း၏ အမတ်ငွေပန်ရခဲငသ်ြယ်။ သု့သှော် သန်း ၁းးး အှောက်ရနယ်ယှာဝင်ထှားသ်ြင တပ်ဖွဲ တပ်ဖွဲ့မျှားအတွက် တနနစ့်နျင်ဲ(၁၂၏) အမတ်ငွေခွဲပေးသ်ြယ်။ သန်း ၁းးး ၁းးး နနင်ငအထက် ရနယ်ယှာဝင်ထှာ့းနျင်မး ၂ပ၉၏ သှာ အမ အမတ်ခွဲပေးသ်ြယ်။ မအမတ်ငွေကု သက်နုင်ရှာ တပ်မပးက မမ မမ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အတွက့်ုအပ်သု့သုံးစွဲနုင်သ်ြယ်။ လပမှာ ယးနဖှော ယးနဖှောင်းန မးးဝကျကျှောင်းန စစ်ဖနပ် စသဖင်ငယ်။ သု့သှော့်ွန်ခဲင့ွန်ခဲငသ်ြင ၉ နနစ်ကတြ်းက တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားသု့ ပေးရမ်ြငအ ပေးရမ်ြငအမတ်ငွေမျှားအှား မပေးတှောငဲု ပန့် ပန့်ြ်ရင်းနနးမနျပ်နနံရန်အတွက် ထှားရနကြှောင်း သရသ်ြယ်။ အချဲတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားမနှာ စးပွှားရေးကြပ်တြ်းမလကြှောင်င အချန်မန အချန်မနပေးသွင်းရန်ခက်ခဲနေရှာမန တပ်မတှော်သှားတု့အ်စုအ်စုငွေမျှားကု့ က့်န်ြငယးငင် ပေးသွင်းမလမျှာ့းုပ်ခဲငကြသ်ြယ်။ တပ်မေ တပ်မတှော်သှားတု့ကြ့်း စးပွှားရေးအခက် အခဲကြှောင်ငုအ်စုအ်စုငွေမျှား ပန်ထုတ့်ုသ်ြငအခါ မပေးနုင်ဖစ်ပြး တပ်တွင် တပ်တွင်းအမန့်ဖနန်မလမျှား ပေခေဲငသ်ြယ်။ လပမှာ-တပ်မ ၁၁ယ်။ုအ်စုအ်စုငွေမျှားကု လးပုင်အတွက် ခေါင်းစလ်ပှောင်းသုံးမလအပင် တပ်မပးနနင် တပ်မပးနနင်ငတပ်ထှောက်တု့က အွဲ့သုံးစှားမလ မျှားကြှောင်ငြ့်း တပ်တွင်းမေ တပ်တွင်းမကျေနပ်မလ ဖနန်မလမျှား ပေခေဲငသ်ြယ်။ လး လးပုင်မနရသ်ြငအမတ်ငွေမျှားကု အွဲ့သုံးစှားမလမျှာ့းြ်း ရနှ့ာသ်ြယ်။ လးပုင့်ုပ်ငန်းမျှား
17.်ယ်။ လးပုင့်ုပ်ငန်းမျှားမနှာ အှောက်ပါအတုင်း ဖစ်သြ်ဲ(၂းး စှာရင်း)- - လးပုင်က အပ်ြငအးပုင်သငြ့်ုပ်ငန်းယ်။ ၃၉ ခု - လးပုင်နနငင်ဖက်စပ်ပုင့်ုပ်ငန်းယ်။ } ခု - လးပုင်နနင်ငတွဲဖက့်ုပ်ကုင်နေသငြ့်ုပ်ငန်းယ်။} - လးပုင့်ုပ်ငန်းခွဲမျှားယ်။ င ခု - လးပုင်နနငင်ချတ်နက်ဲ(သု့မွုတ်) လးပုင်မနုဘှာငွေေုဘှာငွေထှောက်ပံငထှားသငြ် စမံကန်းမျှာွးး၍ ခွဲခှားနုင်သ်ြယ်။ အချပ်နုရသှော် ပ ပ်ြထှောင်စုမန်မှာနုင်ငံစးပွှားရေးလးပုင့်မတက်တွင် ရှာနလန် ရှာနလန်းပ်ြငထှောက်ပံငထှားသှော ကုမပအု့ပ် ငန်းမျှား နနင်င အကျးတးဖ အကျးတးဖက်စပ်ကုမပအု့ပ်ငန်းမျှာွးး၍ နနစ်မျးရနသ်ြယ်။့ုပ်ငန်းအမျးအစှားမျှားမနှာ ကျှော ကျှောက်မျက်ရတနှာတးးဖှော်ရေးနရေလသတျေတးးဖှော်ရေးန ခဲသတဝျတးး ခဲသတဝျတးးဖှော်ရေးန အထ်ြချပ် စက်ရုံန သစ် သစ်နနင်ငသစ်အခေပျု့ပ်ငန်းန စှားသှော စှားသှောက်ကုန်နနင်ငအဖျှော်ယမကှာု့ပ်ငန်းန ကုန်သွယ်ရေးန ကုန်တုက်းဝ ကုန်တုက်းဝကး မျှားနုအ့်ုပ်ငန်းနွုတယ်နနငင်ခရးသွှာှး့ာရေးန သယ်ယးပု သယ်ယးပု့နှောင်ရေးန ကြေးနန်းနက်သွယ်ရေးနနင်င့ နျပ်စစ် ပစ္စြ်းန ကွန်ပျ ကွန်ပျ တှာန နှောက့်ုပ်ရေးန ခံမေအရှောင်းအးယ်န သံမအစက်ရုံနု့ပ်မေု့ပ်မေထုတ့်ုပ်ရေးန နအုန်း စုက်ပျးရေးန သကြှားစက်န ရေထွက်ပ ရေထွက်ပစ္စြ်ုး့ပ်ငန်းန မှော်တှော်ကှားစက်ရုံန အ့နကုန်နနငင် စှာရေးကရယှာ စှာရေးကရယှာနုင်မျှား စသ်ြတု့ ပါဝင်သ်ြယ်။
18. ကုမပအအမ်ြမျှား မန်မှာငပတဝမှာုး့ပ်ငန်းန World Precious Gem Co. Ltd.န နှ့ာငုးမကုမပအန အှာရနအဖုးတန်ကျှောက်မျက် ကုမပအ့မတက်န မန်မှာ မန်မှာစ်ြသးရတနှာကုမပအန ဇှော်ဇှော်ကုမပအန ရနမ်းငုးမ ကုမပအန ကျှောက်မျ ကျှောက်မျက်ရတနှာ တးးဖှော်ရေ့းုပ်ငန်ဲး(မုးကုတ်-မုင်းငနး- နန်းယှား)န သပတ်ကျင်း ရေလသတျေတးးဖှော်ခင်ုး့ပ်ငန်းန မှော်ချး ခဲသတဝျတးးဖှော ခဲသတဝျတးးဖှော်ခင့်းုပ်ငန်းယ်။ မန်မှာ အင်ပရယယ်ျတ် ကုမပအ့ မတက့် မတက်န ရနယ်ယှာမသှားစုကုမပအ့ မတက်န Gold Gade Gems Co.န နှ့ာရုးမ ကုမပအ့မတက်န နှားမေနှာ်ကျှောက်စမ်းတးုး့ပ်ငန်းန ကျှောက်စ ကျှောက်စမ်း ကျှောက်မျက်ရတနှာ အချှောထုတ့်ုပ်ခင်ုး့ပ်ငန်းယ်။ Myanmar Jade International (ကျှောက်စမ်းရှောင်ဲး(ွှောင်ကှောင်))န ပျလ်းမပ ပျလ်းမပင်စက်မလဇုံယ်။ အထ်ြချပ်စက်ငုံမျှား Myanmar Segye International Ltd., Myanmar Daewoo International Ltd., Myanmar Unimix International Ltd, Hwa Fhu International Ltd. မန်မှာငမေယှာနနငင်ဖွံ့ဖျြးရေ့းမတက် စက်မလု့ပ်ငန်းနုင်ရှာ အမ်ခံမေနှောက့်ုပ်ရေ့းုပ်ငန်းန Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte. Ltd. Red Ruby စးကရက်စက်ရုံနးးယှားစးကရက်စက်ရုဲံ(ပခုကင )န မးတကုန်သွယ်ရေးကုမပအ? စးကရက်ဖန့်ဖးရေုး့ပ်ငန်းနုယှာုယှာဖန့်ဖးရေ့းုပ်ငန်းန စှားသုံးနန ဓှာတ်နန ဇယ်န မှော်တှော
19. မှော်တှော်ကှားန သံမအ တု့တင်သွင်းခင်ုး့ပ်ငန်းန ပဲနနငင်ပဲမျး ပဲနနငင်ပဲမျးစုံန အဝတ်အထ်ြန ကျှောက်မျက်ရတနှာန စးကရက်နနငင်ုယှာတးုးယှာတးးမျှား တင်ပု့ခင့်းုပ်ငန်းန နုင်ငံ နုင်ငံခှားငွေဲ့နယ်မလု့ပ်ငန်း မဝတုအ် တန္ဓျ့သယ်ယးပု့နှောင်ရေုး့ပ်ငန်းန ပါရမပု့နှောင်ရေးန ရနမ်းမေ့းန ရေလမန် ရေလမန်းသးန ပုသမ်သးနုတ်စ်ကှာုး့င်ုး့ပ်ငန်းန အဝေးပေးခရးသြ့်ုပ်ငန့်ုပ်ငန်းန ကုန်စ်ြသယ်ယးပု့နှောင်ရေုး့ပ်ငန်းန မးတ မးတခရးသွှာုး့ပ်ငန်းန ခရးသွှားဝန်နှောင်မလု့ပ်ငန်းန နးေးနးေွးုတယ်နနငင် ခရးသွှာ့း မတက်န Central Hotel, Ngwe Saung Beach Hotel, Mogok Motel, နးေွးုတယ်နနငင်ခရးသွှား အေ်ျင်စ အေ်ျင်စနွှော်တယ်နနင်င ခရးသွှာုး့ပ်ငန်း မန်မှာုငးဝါရ့မတက်န Singapore – Fraser & Neave ကုမပအနုယှာနနင်င အရက်ချက့်ုပ်ငန်ဲး (မန်မှာုယှာန အေုစ အေုစစတှောက်ုယှာန တုက်ါုးယှာ)န Myanmar Posco Steel Co. Ltd.န တှောင်ကုရးယှား ပွုန်နနငင်သံမအ ကုမပအန Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd.(သွပ်ပှာုး့ပ်ငန်း)န Myanmar Nouveau Co Ltd (ကျှောက်မျက်အချှောထ်ြပစ္စြ်းမျှား ထုတ့်ုပ်ရေး)န Myanmar Cement Co., Indonesia – P.T. Semen Cibninong & P.T. Prima Comexindoု့ပ်မေထုတ့်ုပ်ရေဲး (နင်မင်ုး့ပ်မေစက်ရုံန ကျေက်နြ်)ွံသှားတေ်ါက်ကွင်းနနငင် မျြဲတှော်က့ပ်န ပဲခးးေ သွှော်တယ်နနင်ွှော်တယ်နနင်ငေ်ါက်ကွင်ုး့ပ်ငန်းန Mercury Manufacturing Co. Ltd. (ပ့ပ်စတစ်ပစ္စြ်းမျှား ထုတ့်ုပ်ခင်း)န
20. Myanmar Samgong Industrial Co. Ltd., South Korea - Samgong Industrial Co. (ရှာုာနေ့ထုတ့်ုပ်ရေး)န Korean Gas Company with Daewoo (ဓှာတ်ငွေ့)န Mamee Double Decker Ltd. (မေ့းရနှား-မှာမးကုမပအ)န အှော်တုခေါက်နွဲထုပ့်ုပ်ငန်းန Myanmar Tokiwa Corporation (ခဲတန်နနငင်အ့နကုန် ပစ္စြ်းမျှား ထုတ့်ုပ်ရေး)န Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd. (့က်ဝတ်ရတနှာု့ပ်ငန်း)န Diamond Dragon Co. Ltd., Berger Paints Manufacturing Ltd., Singapore – Berger International အမ်သုတ်နေးထုတ့်ုပ်ရေး The First Automotive Co. Ltd., Isuzu, Mitsugi (မှော်တှော်ယှာလ်ထုတ့်ုပ်ရေုး့ပ်ငန်း)န Suzuki (မှော်တှော်ယှာလ်နနင်င မှော်တှော်နုင်ကယ် ထုတ့်ုပ်ရေုး့ပ်ငန်း)န Myanmar Forward Support Co. စကြှာပး– SKS Marketing Pte. (ကုန်သွယ်ရေးနနငင်ကုန်ပစ္စြ်းတင်ပု့ဲလပှောင်းရေး)န NTCY Fair Price Cooperative Ltd (ကုန်တုက်းဝကးမျှားနနငင်ကုန်ပစ္စြ်းမျှား တင်သွင်းရေး)န မန်မှာရှာုာုး်ကုမပအ့မတက်န သ သစ်အချှောထြ့်ုပ်ငန်ဲး (မှော့်မျြင်)န တှော်ဝင် ပ့ပ်စတစ် ရက်ထ်ြအ ရက်ထ်ြအပ် စက်ရုံနန တှော်းင်ပ့ပ်စတစ့်းသုံးကုန်စက်ရုံန ပ ပနံအတ့်ုပ်ငန်းန ပ့ပ်စတစ်ပစ္စြ်ုး့ပ်ငန်ဲး(ကျှောက်နြ်)န်ရင်ရင်းနုက် ကျှောက်ပှား စက်ရုံကျှောက်ပှာုး့ပ်ငန်ဲး (ကျှောက်နြ်)န
21. ငွေပင့်ယ်မွေးမ ရေးနနင်င ရေု့ပ်ငန်း ကုမပအန ကြက် ငါး ပုဇွန်မွေး ပုဇွန်မွေးမ ရေးနနင်င ပင့်ယ်ငါးဖမ်ုး့ပ်ငန်းန ငနက်သုက် ထုတ်ယးခင့်းုပ်ငန်းန့ုပ်ငန်းန ရေထွက်ပစ္စြ်းပု့ကုန့်ုပ်ငန်းန မန်မှာ နှာနတ်ရြ့်ုပ်ငန်ဲး (ပဲခးး)န နှာ့ဖ ရစ် အက်စစ်စက်ရုဲံ (မုံရွှာ)န သြ သကြှားစက်ရုဲံ(လကငံ)နဲ(အင်းငါးခွ)န ပုမ္မှာနပ်ပှာစက်ရုဲံ (ပေါင်)န မးတ မးတ သှောက်ရေသန့်ုပ်ငန်းန မန်မှာငစးပွှားရေးကှော်ပုရေးရနင်း ငယ်။ မန်မှာငစးပွှားရေးကှော်ပုရေးရနင်ဲး(မစက)သြ် စစ်တပ်မန စမံခန် စမံခန့်ခွဲု့ပ်ကုင်သ်ြင စးပွှားရေးအဖွဲ့အစြ်း နှောက်တခု ဖစ်သ်ြယ်။ ဖစ်သ်ြယ်။ သြ် တပ်မတှော် အ့နျဲးနက်နုံး စး စးပွှားရေးအဖွဲ့အစြ်းတခု ဖစ်ကှောင်းဖစ်မ်ြယ်။ ၁င်င ခု မတ့်တွင် မတ့်တွင် နးတ အစုးရသြ် နုင်ငံပုင်စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းလပေ ကု ပ်ှာန်းခဲငရှာ ပ်ှာန်းခဲငရှာ မလပေ အရ စးပွှားရေ့းုပ်ငန်း ၁၂ ခုကု နုင်ငံပု နုင်ငံပုင်စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းအဖစ့်ုပ်ကုင်ရန် အစုးရသှော အခွင်ငအရေး အခွင်ငအရေးရနသ်ြန သု့သှော် တခှာ့းးပ်ုဂျ့် သု့မွုတ် တခှား တခှားအဖွဲ့အစြ်းတခုခုနနငင် ဖက်စပ့်ုပ်ကုင်နုင်သြ်ွု ဖှော်ပပါရနသ်ြယ်။ ၁ငင ခု မတ့်တွင် နုင်ငံတှော်မန ငွေကြေးမထ်ြငဝင်ဲု ဝန်ထမ်းအ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစြ်းတခုခုက အနုပါု့ပ်ငန်းမျှားကု့ုပ် နုင်သ နုင်သြ်ွု လပေ ကုပင်နင်ပြးနှောက် မန်မှာင မန်မှာငစးပွှားရေးကှော်ပုရေးရနင်းကု ထးထှောင်ခဲငသ်ြယ်။ တရှားဝင်ထု တရှားဝင်ထုတ်ပန် သ်ြင ရ်ြရွယ်ချက်မနှာ နုင်ငံတှော်စးပွှားရေး ဖွံ့ဖျြး ဖွံ့ဖျြးရန်အု့ငနှာ တပ်မတှော့်ုအပ်ချက်ကု ဖ်ြငန
22. ဖ်ြငနြ်းပေးခင်းဖင်င ကှာကွယ်ရေးအသုံးစရတ် နျေှ့ာငချရန် နျေှ့ာငချရန်န တပ်မတှော်စစ်မလထမ်းမျှား သက်သှာချှောင်ချရေးကု့ုပ်နှော့ုပ်နှောင်ရန်နနငင် တပ် မတှော်အတွက် အခှာုး့အပ်သှော ကစ္စရပ်မျှား ကစ္စရပ်မျှားအကှောင်အထ်ြဖှော်ရန်ွး၍ဖစ်သ်ြယ်။ဲ(မစက) ကု စစ်ထှော စစ်ထှောက် ချပ် တု့်ချပ်ေွး့င် ရုံးအှောက်တွင်ထှားရနသ်ြယ်။ဲ(မစက) က ကနလးရင်းနနးမနျပ်နနံမလမနှာ ကျပ်ငွေဲ(၁း)ျုံ့ရနသ်ြယ်။ စက်ငုံမျှား သံမအစက်ငုဲံ(အှောင့်ံ)ဲ(မှောင်း ကှာ)ဲ(အင်းစန်ရွှာမ)ဲ(မင်းခဲံ(မင်းခံ)နု့ပ်မေစက်ငုဲံ(မျြင်ကေ့း)ဲ(ကျှောက် နြ်)န စကျင်ကျှော စကျင်ကျှောက်ပှားစက်ငုဲံ(မနဝေ့း)န်ရင်းနုက်ကျှောက်ပှားစက်ငုဲံ(ျွ့င်ကှော်)န အှောက်န်ျင်စက်ငုဲံ(ရန်ကုန်)နဲ(ရန်ကုန်)န သကြှားစက်ငုဲံ(ကန့်ု့း)ဲ(တှောင်စလ်အေး)ဲ(အှောင့်ံ) န မက်သေ န မက်သနှောစက်ငုဲံ(ကန့်ု့း)န အမုးပှားစက်ငုဲံ(အင်းတကှော်)န ရန်ကု ရန်ကုန်နေးဝါးစက်ငုဲံ(မေနှာ်ု)န်ုံယှာချက်စက်ငုဲံ(ရေလပ်ြသှာ)န SIGMA ဝါယှာစက်ငုဲံ(့လင်သှာယှာ)န ကျှောက်မးသွေးစက်ငုဲံ(မှောတှောင်)နေ်ါ န်မုေ်ါ န်မုင်ဲး(သပေါ)ဲ(ထုံုးု)န သစ်အချှောကုင်စက်ငုဲံ(စစ်ကုင်း)န အင်းဝုအ်န အင်းဝထရေး င်းန မန်မှာ အပြ် အပ်ြပြ်နုင်ရှာအှာမခံ ကှော်ပုရေးရနင်းန ရတနှာချင်းတွင်းသတဝျတွင်းကုမပအန Northern Star Minerals Production & Trading Co., Ltd.နဲ(သြေှုာဖျက်စက်ငုဲံ(သ့ဝါ))န ကုန်စ်ြခန့်ခွဲခင်ုး့ပ်ငန်ဲး(ရန်ကုန်)န Tyazhpromexport Co., Ltd., Daniele Corp, Italian-Thai Corp.,
23. Daewoo International Corp., Myanmar Hyosing Corp. (SK Network Corp.), Hyosung Singapore Pte. Ltd., Kawasaki Plant Systems Ltd., Sinaran Corp., Grade Nine Co., Ltd., Myanmar Tractors Ltd., YMCC Yunnan, K-Y Kyaw Kyaw Co., Ltd., Zuri Co., Ltd., Moon Ray Co., Ltd., VSV Asia Co., Ltd., Superium Enterprise Co., Ltd., JFE Co., Ltd., Marubeni Co., Ltd., Sojit Co., Ltd., Polyice Co., Ltd, GMT Co., Ltd., Golden Star Co., Ltd., PEG Co., Ltd., Diethelm Co., Ltd., MCM Chem Tech Co., IE Petroleum Products Co., Ltd., Flying Sun Moon Co., Tractors World Co. KSS,်ုံဝင်းဝင်းန သံွ့င်န မန်မှာကုင်ုန ငွေနင် သံမလ တံတှားှေုာင် သံနးးးဝကျး သံငုင်း ထုတ့်ုပ်ရေးန ကုန်သွ ကုန်သွယ်ရေးနနငင်ကးးသန်းရှောင်းးယ်ရေုး့ပ်ငန်းန စုက်ပျး စုက်ပျးရေးထွက်ကုန်ပစ္စြ်းကုန်သွယ်ရေုး့ပ်ငန်းနးန်နှေားန်နှောင်မလု့ပ်ငန်းနုအ့်ုပ်ငန်းန အှာမခုံ့ပ်ငန်းန စက်မလ စက်မလထုတ်ကုန်ထုတ့်ုပ်ရေုး့ပ်ငန်းနနင်ငနှောက့်ုပ်ရေုး့ပ်ငန်းန သတဝျတးးဖှော သတဝျတးးဖှော်ထုတ့်ုပ်ရေးနွှော်တယ့်ုပ်ငန်းန ရေနံနနင်င သှုာဝ ဓှာတ် သှုာဝ ဓှာတ်ငွေု့ပ်ငန်းန သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန့်ုပ်ငန်းန အခှားစးပွှားရေုး့ပ်ငန်းမျှား ၁းယ်။ စစ့်က်နက်ပစ္စြ်းလန်ကြှားရေးမပးငုံးန ထှောက်ပံငန ထှောက်ပံငနနင်ငပု့နှောင်ရေ်းလန်ကြှားရေးမပးငုံးန ပ်ြသ့းနက်နံ ပ်ြသ့းနက်နံရေးနနင်င စတ်ဓှာတ်စစ်နင်ရေ်းလန်ကြှားရေးမပးငုံး တု့ကြ့်း တ တု့ကြ့်း တရှားဝင်စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းမျှားကု့ုပ်ကုင်နေကြသ်ြယ်။
24. ကကနက်န ကကပံငန ကကပ်ြန တပ်မတှော် ချြ်မနျင်စက်ရုဲံ(မတှေ့ာ)န တ တပ်မတှော် အထ်ြချပ်စက်ငုဲံ(မ်ြှ့ာုံ)န တပ်မတှော် မုး မုးရေကှာဖျင်စက်ငုဲံ(သမုင်း)န တပ်မတှော် ငနးဖနပ်စက်ငုဲံ(သမုင်း)န တပ်မတှော တပ်မတှော်ချြ်မနျင်စက်ရုဲံ(သမုင်း)နတပ်မတှော်ှေုာုံ့းစက်ရုဲံ(မေနှာ်ဲု(မေနှာ်ု)န တပ်မတှော်သတျေပစ္စြ်းစက်ရုဲံ (အုတ်ကျင်း)န တပ်မတှော် သှားရေစက်ရုံ သှားရေစက်ရုဲံ(မနဝေ့း)န တပ်မတှော် နေးါးးစက်ရုဲံ(မေနှာ်ု) န တပ်မတှော တပ်မတှော့် လက်စက်ရုဲံ(နမ်ငနန်)ဲ(သံတှောင်)ဲ(ရန်ကုန်)န တပ်မေ တပ်မတှော်စ်ြသွပ်စက်ရုဲံ(မနဝေ့း)ဲ (သံတွဲ)န တပ်မတှော် ပုဇွန်ငါး ပုဇွန်ငါးပနနငင်ငါးချလ်စက်ရုဲံ(မေနှာ်ု)န တပ်မေ တပ်မတှော်ုစကွတ်နနငင်ခေါက်နွဲစက်ရုဲံ (မေနှာ်ု)န တပ်မတှော်ရ တပ်မတှော်ရမ်စက်ငုဲံ(ရေလပ်ြသှာ)န တပ်မတှော်ျံမလန့်စက်ရုဲံ(သြှုာ)န ပျလ်းမ ပျလ်းမပင် နု့ထွက်ပစ္စြ်းစက်ငုံန မဝတပုံနနပ်တုက်န မဝတငုပ်သံ ၁၁ယ်။ အနင်ငအသးသးရန တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားသြ် စး စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းမျှားတွင် နက့်က်ပါးင့်ုပ်ကုင်နေကြ သ်ြသှာ သ်ြသှာမက တုးချဲ၍ပင့်ုပ်ကုင်နေကြသ်ြယ်။ အှောက် အှောက်ခေအနင်ငတပ်ဖွဲ့မျှားေ စှားသှောက်နုင့်ုပ်ငန်းနနငင် အခှား အ်မ်တွင်းမလ အ်မ်တွင်းမလု့ပ်ငန်း စသ်ြင သှာမန်စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းမျှားအပင်န အချဲ အချဲတပ်ရင်းမျှားသြ် ရေခဲစက် သု့မွုတ် ကုန့်း မ်းသ့ မ်းသယ်ယးပု့နှောင်ရေး စသငြ် အငယ်စှာုး့ပ်ငန်းမျှားတွင် ပါးင့်ု ပါးင့်ုပ်ကုင်နေကြသ်ြယ်။ တပ်ပုင်အနှောက်အလးန့ နျ့ နျပ်စစ်ဓှာတ်အှားသှာမက ကုန်တင်ကှားမျှားကုပင် စး စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းအတွက် ငနှားရမ်းသ်ြငကစ္စ အမျှားအပှား ရန သ်ြယ်။
25. ၁၂ယ်။ သု့သှော် အကျးခံစှားခွင်ငရရနသ်ြင တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားအကြှား နေရှာအတှော နေရှာအတှော်မျှားမျှားေ ကွှာမလရနပုံပေသြေ်ယ်။ ထှောက်ပံငမလမျှားတွင် အနမတ အနမတန်ကွှာမလရနသ်ြယ်။ တချဲတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားသြ့် စ့ စလ်ထှောက်ပံငငွေ အတှော်အတန် ကှောင်းမွန်စွှာပေးနုင်ပြး အထးးသဖငင အထးးသဖငင်ေးးံ့ခေါင်ဖျှားေ သမျှားရန တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားမနှာမး ငွေသှားထှော ငွေသှားထှောက်ပံငမလမနှာ အနမ်ငနုံုး့အပ်ချက် ဖင်ြနးန ဖင်ြနးန်ုင်ရန်ပင်ခက်ခဲ့နသ်ြယ်။ ၂းးး ခုနနစ်တွင် ၁၉းး ကျပ်မနျ ကျပ်မနျသှာ ထှောက်ပငံနုင်ပြး ၂းး၃ ခုနနစ်တွင် ကျပ်ဲ(၃းးး) သှာ ထှောက်ပံငန ထှောက်ပံငနုင်သ်ြယ်။ မဖစ်ရပ်မျှားမနှာ အဖွဲ့အစြ်း စြ်ုးံ့ြးွတ်မလကု စတင်ြ စတင်ခြမ်းခှောက်နေပြးန တပ်ရင်ှးုားတုက်မျှားတွင့်ုင်စင်မဲင ကှားမျှား ကှားမျှားထှားပေးခင်း သု့မွုတ် စစ်ထရပ်ကှားမျှားဖင်င မေနှာင်ခု မေနှာင်ခ်ုကုန်မျှားသယ်ယးပေးခင်း စသ်ြင လပေ ပင်ပစး ပွှားရေုး့ ပွှားရေုး့ပ်ငန်းမျှားတွင် ပါးင့်ုပ်ကုင်ရန် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မျှားကု အှားပေး အှားပေးနေခင်ြး့်း ဖစ်သှောကြှောငင်န တပ် မတှော်ခေါင် မတှော်ခေါင်းနှောင်ပုင်းမျှားက တသးပ်ုဂ့စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းမျှား ရပ်ပစ်ရ ရပ်ပစ်ရန် နုံးဖတ်ခဲငသ်ြယ်။ ၁၃ယ်။်းန်းဝက်းှာနမျှားနနငင်လးစ်းှာနမျှားသြ်းန်ထးန်ထမ်းသက်သှာချှောင်ချရေးအကြှောင်းပပြး ရံပုံငွေရနှာဖွေရန် အတွက် စး အတွက် စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းမျှား ဖွဲ့စြ်းရတှောငမ်ြမွုတ်ယ်။ ၂းး၃ ခုနနစ် ခုနနစ် ဇင်ှုာ့မနစ၍းန်ထမ်းအှာုးံ့းအတွက် အစုးရက တလ့းနျင် ကျပ် ၉း ၉းး့း စလ်အပုနှောင်းငွေပေးထှားပြးဖစ်သင်ြအတွက် မနနစ်ကု မနနစ်ကုန်တွင် စးပွှားရေ့းုပ်ငန်းအှာုးံ့း ရပ်နုင်းကြရန်ွု ၂းး ခုနနစ်
26. ခုနနစ် စက်တင်ှုာဲ့(၃း)ရက်နေ့န ကက်ုနက်အစြ်းအေးးနေ တု့် ချပ်မနးချပ်မနးးဝကးသန်းရေလက့ မ်းလြန်ချက်ပေးခဲငသ်ြယ်။ စုက်ပျး စုက်ပျးရေုး့ပ်ငန်းမျှားမနွဲ့၍ စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းအှာုးံ့းနနငင် တပ်ရင်းရံ တပ်ရင်းရံပုံငွေနနင်ငနက်စပ်သ်ြင တရှားး တရှားးင်ပတ်ပင်ထှားသငြ့်ုပ်ငန်းမျှားကု ၂းး ခုနနစ် မတ့်ဲ(၃၁)ဲ(၃၁)ရက်နေ့တွင် အနုံးသတ်ရန် ဇင်ှုာ့တွင် ကှာ ကှာကွယ်ရေးးန်းဝက်းှာနက တပ်မတှော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အှာုးံ့းသု့ လြန်ြ လြန်ကြှားချက် ထုတ်ပန်ခဲငသ်ြယ်။ မအမန့်သြ် စး စးပွှားရေုး့ပ်ငန်းအချဲအှားးန်းဝက်းှာနမျှား သု့မွုတ် အဖွ အဖွဲ့အစြ်းအသးသးသု့ဲလပှောင်းပေးရန်နနင်င မွဲ့လပှောင်းသငြ မွဲ့လပှောင်းသငြ့်ုပ်ငန်းမျှားအှာုးံ့း ဖျက်သမ်းပစ်ရန် ဖစ်သ်ြယ်။ မန်မှာငစပွါးရေးလးပုင့်မတက်နနင်ငနုင်ငံတှော်ုဘှာ ၁ ယ်။ုတယတု့်ချပ်းဝကးတင်အေဲး(ဲ(နုင်ငံတှော်အေးချမ်းသှာယှာရေးကှောင်စအဖွဲ့ဝင် နနင်ငကှာကွယ်ရေး နနင်ငကှာကွယ်ရေးပစ္စြ်း ထုတ့်ုပ်ရေးအရှာရနချပ်) မန်မှာင မန်မှာငစပွှားရေးလးပုင့်မတက် လကင် တှာဝန်ယးပးနှော https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283745035 074002&id=312456202202895&substory_index=0 Daw Aung San Suu Kyi April 12 · 2017
27. နဲတဲ့သးကု ပျံးပြးကြ်ငရဲတဲ့သတဝ ~~~~~~~~~~~~~~~ ``်ျတကျ တု့်မလး ပှောပတဲ့ အမေစုမန့်ခွန်း´´ ပြ့်ုံးကျွတ်နဲ့သတင်းစှာကနေ နဲပွဲးဝက့းုပ်နေချန်ကပါယ်။့းထုနဲပွဲအပန်ုတ်စ်ကှားတစ်စး သံနးးးဝကျးတွေဖွင်ငဝင့်ှာကှာ အမ်ရေနဲရပ် နဲကြပါသ်ြယ်။ "ကှု့ား………ု့းး ပ်ြဖျက် တုင်းပ်ြက ထွက်သွှား ငါ………………် စုံနေအှောင် အုပ့်ုက် တပျှော်တပါးးဝကး အကျယ်းဝကး နဲကြတှာပပပ အနှားမနှာ စစ်သှားတွေဲု ရနတယ်ယ်။ုယ်သးမန ပေးမဝင်ထှားတဲ့နေရှာမနှာ (သင်နှုာု့ပ်မဲ့) အမ်ထဲခံထဲကနေ မကြှားသု့ နေမယ်ထင်ပှါ့ားယ်။ မွုတ်ုးးခင်တျှာယ်။ အရင် သံတခါးနှား ခုံေ့းနဲ့ ထွက့်ှာပါတယ်ယ်။ အှာုးံ့းမျက့်ုံးပးးဝကးနဲ့ ဝုင်းကြ်ငကြပါတယ်ယ်။ အမေစုက အှောင်မင်တဲ့ အသံနဲ့ပှောပါတယ်ယ်။
28. ဝါကျ ကြှောင်းပဲ ပါပါတယ်ယ်။ တတ်နတ်ငြမ်သက်ပြး ပါစပ်အွှောင်းသှား ဖစ်တဲ့သးဖစ် မျက်ရြ့်ြ်တဲ့သြး့်နဲ့ ဖစ်သွှားပါတယ်ယ်။ တတ်နတ်စွှာခှောက်ခှားမလကု မခံနုင်တဲ့အနုံး တု့်မနးက်ွေငကှောင် ကှားမှောင်းစမ်းတဲ့ယ်။ ရုင်ှုာစက်နလးပြး မှောင်းထွက်သွှားပါတယ်ယ်။ တတ်နတ်စွှာ မျက်စေငတနုံ့းုက်ကြ်ငနေတဲ့ အမေစု သက်ပင်းချ ရင်မှောပျံးနဲ့ အမ်ထဲ ပန်ဝင်သွှားပါတယ်ယ်။ှုာပှောု့က်တှာဲ့ ပပပ ကျွန်တှော်င အသြ်းထဲမနှာ အမြဲသတရတုင်း တုန်ယင့်ှာအှောင် ကှောင်းပါတယ်ယ်။့ က်တွေဲ ပါဝင်တဲ့ သးတွေနပန်မေးကြ်ငကြပါယ်။ ကျွန်တှော်ပန်မရေးနုင်အှောင် ခံစှားရပါတယ်ယ်။ တှာဝန်ကျ စစ်သြ် တအုပ့်ုံး အသစ့်ဲပေးရသြ် အထ ကြှားခဲ့ရတဲ့ အစှော အစှောင်င စစ်သှားတွေပေေ သက်ရှောက်ခဲ့ရတှာပါယ်။ သးမ ပှောခဲ့တှာက…………ယ်။ " သှားတု့ ခအနေကြပါလး အန်တ တခုှေ့ာက်ပှောချင့်ု့ပါ……်အှာုးံ့းငမ်သွှားမန
29. " အခု သှားတု့ပ်နေကြတှာကု အန်တ သှေုာကျတယ်ယ်။ ကုယ်မကျြက်တဲ့သးကု မးဝကျက်တဲ့အကြှောင်း အဲင့းငေနဲမနှာ ရဲရဲ ရဲရဲတင်းတင်း ပှောရဲပှောခွင်ငရနရမယ်ယ်။ အဲ့ါအန်တ တှောင်းနုနေတဲ့ မုကရေစနုတှာပဲယ်။ နက်ပှောကြပါပပပ ယ်။် တဲ့ (Khaingkoooုှေ့ာငခ် မနကးးယးဖှော်ပပါသ်ြယ်။) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2374136733 99607&id=100013929283236 ဇေ့ င်း Zay Lin. April7· 2017 နေဝင်းရဲအကြှောင်း သ့းမေး အေးနေဝင်းကု ပှောပု့က် တု့်ချပ်နေဝင်း ဖစ့်ှာမယင် သခင်ငးမှောင် ဦးနေဝင်း တု့်ချပ်နေဝင်း ဖစ့်ှာမယင် သခင်ငးမှောင်ကန်ုက ရေလ်ုံတု ရေလ်ုံတုင်စှာတုက်မနှာစှာတုက် စှာရေး တျယ်။မနက်ပုင်းစှာဝေ စှာပု စှာပု့ကစ္စတွေပြး ရင်နေ့ယ်ှေ့ာက်နုအခု ခုံး ကျှော်တံ ကျှော်တံတှားနှောက် နေတဲင ရေလ်ုံတုင်မးပျွငင်ရဲ အနှောက် မှောက်ထှောငင မှောက်ထှောငင်က စှာတုက်ရေနဲက ပ့က်ဖှောင်းပေမေနှာ ကျှားပဲထုး ကျှားပဲထုးထုး နေတှာယ်။ အချန်ရနသရွေဲကျှားထုးနေ တှာပဲယ်။ သးက ကျှား ကျှားထုးတှာကု ထမင်းမေငွင်းမေင ထုးတတ်တယ်ယ်။ သှားနဲ သှားနဲ့မယှားနဲ့ရနပေမယင် စှာတုက်စှာ ရေ့းခနဲှု့ာနဲ့်နုတှောင ထမင်း တှောင ဝေ တှောင ဝအှောင်စှားနုင်တှာပေါငတျှာယ်။ ကျှားသမှားနုတှောင အကွက်က မင်တတ်တ
30. မင်တတ်တယ်ယ်။ ကွက်ကျှော်မင် တတ်တယ်ယ်။ု့တမှာအစြ်းအငုံးထဲ ဝင်ထှားပေ ဝင်ထှားပေမယင်သ့းကုယ်သခင်က မန သပ်ဖက့်နဲတကင်း မရန့နပါုးးယ်။ သခင် သခင်အှောင်နန်းတု့ သခင့် နဖေတု့န သခင်စုးန သခင်သန်းထွန်း တု့ကုယ်ခေုယ်ခေဖျှားမမဲ့ယ်။ါပေမဲင သ့းအစ်ကုအရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြး သခင်တစန်ရဲဇနး မ မသှားစုကုတှောင အပုင်ပေါင်းထှား နုင်တယ်ယ်။ အထးးသဖငင်သခင်တစန်ရဲ မန်းမးဝကး မန်းမးဝကးက သဲးကု အတှော်ခင် မင်တယ်တျှာယ်။ါေ့းကြ့်း မန်မှာင မန်မှာငသမုင်း ချှောက်ထဲကျဖု့ ဖစ့်ှာစေခဲငတှာပဲတျှာယ်။ ကျပ်တု့ မန်မှာပ်ြကြ့်း ကံနုးပါတယ်ယ်။်ျပန်တု့်မနးးဝကး နးဇးကးနဲ(တဲု(တု့်မုးးဝကျး)နဲ့ တု့်ချပ် အှောင်နန်းန သခင့်နမျြင်တု့တငုတ် ပြ် အမျွ အမျွင်မျြဲမနှာ တွေကြပြး တု့်ချပ်ကုျပန်ခေသွှေားန မန်မှာင့ွတ့့်ွတ့်ပ်ရေးစမံချက်ကု တု့်ချပ် အှောင်နန်းကရေးနွဲပြး တု့်မုးးဝကျး က တ က တစ်နငင်ျပန်စစ်ဦးစးအဖွဲကု တင်ပသှေုာတးတှောင ရဲှေုာ ရဲှေုာ်သုံး ကျပ်ကုအသုတ့်ုက်ဖှော်မုနှာကွိန်း မနှာ စစ်ပြှာသ စစ်ပြှာသင်ဖု့ ခေတှောငတှာ ပေါငယ်။ သခင်အှောင်နန်းက တု့် တေဇအ တေဇအဖစ်န သခင့်နဖေက တု့် က်ျှာအဖစ်နသခင်အှောင်သန်းက တု့်စ တု့်စးဝကြှာအဖစ်နကုရေလကတု့်ကျှော်ဇှော အဖစ်နတု့်ဇေယျ စတှာတွေဖ စတှာတွေဖစ်ကြ ပြးယ်။ စစ်ဖစ်ခါနးနုတှောင့းက့ြ့်းုနေတှောင သခင်တစ သခင်တစန်ုက် အခမ်းက့ုး့နေတှာနဲ့ တစ်နေ့ ယ်ခင်းမနှာ သခင်တ သခင်တစန်ဇနးက သခင်ငးမှောင်ကုသတရပြးသးကုယ်တုင့့်းလတ်ပြး ရေလ ရေလ်ုံတုင့်မ်းနုံက စှာတုက်စှာရေး သခင်ငးမှောင်ကု ခေခေုင်ုး့က်တယ်ယ်။ သခင်ုစန်ုက်ကအခမ်းက်ျပန်ပု့ဖု့ုး့နေတဲငအချန်မနှာ သခ သခင်ထွန်းအုပ်က အ်ြ့ပ် ပု့ပ့်ုက့်ု့ အမ်တစ်အမ်ရဲ ထပ်ခုးမနှာ ပု ပုန်းနေရတုန်း အမ်ရေနဲ့မ်းထဲက သခင်ငးမှောင်ဲ(တု့်
31.ဲ(တု့်နေဝင်း)ဖတ် သွှားတှာ မင့်ုက်တယ်ယ်။ါနဲ့ သခင်ထွန်းအုပ့်ြ်း အဲင အ အဲင အမ်က ကေ့းတစ်ယှောက်ကု့ုက်ခေေ ခုင်းပြ်းျပန်ကု ရဲှေုာ ရဲှေုာ်သုံးကျပ် အဖစ်နဲ့ ထငြ့်ုက်တှာ ဖစ်တယ့်ုဲ့ (သ့ုဲ့ (သခင်ထွန်းအုပ်ကုယ်တုင်က ပန်ပှောတှာကု ကျပ်မတ်နွေ ကုယ်တု ကုယ်တုင် နှားထှောင်ခဲငရတယ်) အဲငါကစပြး သခင်တစန်ုက်အုပ်စုကနေ ရဲှေုာ်သုံးကျပ် အဖွဲ အဖွဲဝင်အဖစ်သခင် ငးမှောင်ျပန် ပ်ြကုပါသွှားပြး တု့်နေဝင်း ဖစ့်ှာ ဖစ့်ှာတှောငတှာပါပဲယ်။ တမှာပြ် ကံနုးပုံက, သခင်အှောင်နန်းနဲ့ သခင့် နမျြင်က်ျပန်ပ်ြရှောက်နေပြ ဖစ်တှောင ဖစ်တှောင မန်မှာပ်ြတွင်းက ၂် ယှောက်ခေရေတှာပေါငတျှာယ်။ သခင် ကု သခင် ကုယ်တှော်မလင်းနဲ့ သခင်မုက် အခမ် အခမ်းကတစ်ဝက်ခေတှောပေါငတျှာယ်။ သခင့်နေ သခင့်နဖေဲ (တု့်က်ျှာ)တု့တု့်ဇေယျ တု တု့ကုရေလဲ (တု့်ကျှော်ဇှော)တု့တု့်ရဲထ်ွတု့ပေါငတျှာယ်။ သခင်တစန်န သခင်ထွ သခင်ထွန်း အုပ်ုက်အခမ်းကြ့်း သခင်အှောင်သန်ဲး (တု့်စးဝကြှာ) နဲ့ သငင နဲ့ သငင်တှော်မယင်သးတွေ ရွေးပု့ကြတှာ ပေါငတျှာယ်။ မျှားသှောအှားဖငင့်းပျ့ွး့းပျ့ွး့တ်တွေ မနခုမဲငသးမရနသး တွေပဲ ရွေးတှာပါယ်။ တမှာပ်ြမျှား ကံနုး ကံနုးချင်တှောင သခင်တစန် ဇနးးဝကးက သခင်ငးမှောင်ကု ခင်မင် မလ မလရနနေတှောင သွှားသတရပြး စလ်းစှား မတယ်ယ်။ သခင်တစန် ကုယ်တုင် ကေ ကတှောင သတရတှာ မွုတ်ပါုးးယ်။ သ့းဇနးကပှောတှောင သခင်ငးမှောင် မနှာ မနှာက သှားနဲ့မယှားနဲ့မု့ သပ်သှေုာ မတွေု့းးယ်။ သခင် တစန်ဇနးကပဲ ထပ်ထပ်ပှောနေတှာနဲ့ သခင် ငးမှောင့်ြ်း သခင်တစန် ကတှော်ရဲ တန်ခုး တန်ခုးနဲ့ ရဲှေုာ်သုံးကျပ် ထဲပါသွှားတှာယ်။ ကျပ်တု့ တမှာပြ် ရှာဇဝင်က အဲင အဲင့ု မန်းမတွေဝင်ဝင် ပြး နုင်ငံရေးန စစ်ရေးတွေမနှာ ဝင်ဝင်ြ
32. ဝင်ဝင်ပြးပါတှာကနေ ကနေ့ တုင်းပ်ြပျက်ရတဲင အခေအနေကု ရှောက်ရ ရှောက်ရတှာပဲယ်။ သခင်တစန်က တှော်က့့းလတ်ပြးအချန်မရနတှောငုးး ရန်ကု ရန်ကုန်နပ်ကမ်းက်ျပန်ကုန် သြေှုာကြ့်း တစ်ရက်နနစ်ရက် အတွင် အတွင်း ထွက်မနှာမု့ရေလ်ုံတုင်စှာတုက် ရေန ရေနဲပ့က်ဖှောင်းမနှာကျှားကစှားနေ တဲင သခင်ငလမှောင်ကု အမန်အေ အမန်အခေေ့ လတ့်ုက်ပြ်းျပန်ပ်ြကု ပါသွှား တှောငတှာပါပဲတျှာယ်။ နှော နှောက်မန်မှာ ပ်ြကု အှာအှာရနင်စံနစ်စတင် မျး မျးစေငချမယင့်ုပ်ပေါက်ကု ပွတ်ကှာ သကှာ့ုး့နေတဲ့ အကြှောင်း တရှားတွေေ တရှားတွေကြှောငင် သေသေချှာချှာ မရွေးကြဲု့ က်သငင်ရှာ့ က်တု့ ပြး ပြး ခေခေဲငတဲင ရွေးကြတဲင ကျပ်တု့ မန်မှာရှာဇဝင်ရဲ ဓငေ့စနစ်နုး ကြှော ကြှောငင် ရဲှေုာ်သုံးကျပ်ထဲကု အှာ အှာရနင်းဝ အှာရနင်းဝကးဖစ့်ှာမယင်တု့်နေဝင်း ကုရွေးထုတ်မခဲငကြတှာပါပဲတျှာယ်။ဲ(အနပ်ပဲ(အနပ်ပင်ရေှေ့ာင်းကြတှာပါပဲ) သမုင်းကြှောင်းငုင်းသွှားစေတဲငမုန့်ွင်းခါး သုက်နရှာကု နေ့ပေေ တင်ခဲငမတဲင ဇှာတ့်မ်းက့ုတျှာယ်။ဲ(ဖဲ(ဖနပ့)ဝန်းဝကးချပ်ွှောင်း ဦးတနွေဲ (ထှားဝယ်)သဲးဇနးတဲုပါပဲ ဖစ်ပံ ဖစ်ပုံက့ုတျယ်။ တု့်ချပ်နေဝင်း ကခေင်မေသန်းနဲ့ ခအခအ တွေဲပါမျှား တွေဲပါမျှားတှောင နးစပ်ရှာကးဝကျက် သွှားကြပြယ်။ တု့်ချပ်နေဝင်းကခေင်ခေင်မေသန်းကု့ က်ထပ်ယ့းုက်တယ်တျှာယ်။ တကယ်တှောငခေင်ခေင်မေသန်းက့က်ရနယှောက်ျှားးဝကးငုတ်တုတ်နဲ့တျှာယ်။ သဲးယှောက် သဲးယှောက်ျှားးဝကးက အ်ြ့န်မနှာရှောက်နေတဲငေါက်တှာေါက်တှာတှောင်းဝကးယ်။သ့းယှောက်ျှားးဝကးနဲ့ကေ့း ပါရနတယ်ယ်။ သတှာဝ သတှာဝင်းန့ဲငဲ့ငဝင်းန သှော်တှာဝင်းတု့ဖစ်တယ်ယ်။ ဝန်းဝကးချပ်ဦးနုက ယှောက်ျှာ့း က်ရနကှာမပုင်ရန့ သဲးတစ်ပါး မယှားကု
MY COLLECTION WHICH I LIKE FROM FACEBOOK POST SHARE TO YOU ALL 2-6-2017 https://www.facebook.com/snow.cherry.589/posts/1885138698413007 Naychi Oo https://www.facebook.com/u.tunmya/posts/481590108839304 U Tun Mya May 25 https://www.facebook.com/zawmyolwin/posts/10154286518825583 Zaw Myo Lwin shared Zaw Lin's April 20 • 2017 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=237413673399607&id=100013929283236 ဇေ လင်း Zay Lin https://www.facebook.com/sanwai07/posts/1240172462730357 San Wai https://www.facebook.com/min.yar.3158/posts/191540447976556 မင်း ယျာ December 22, 2016 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=989590071156168&id=312456202202895 Daw Aung San Suu Kyi May 15, 2016 •